Inhloko Zendaba Lwezi 22, 2019
*** Umantshi wakoBulawayo ugweba uJosphat Mzaca Ngulube labanye abathathu ukuba bahlale ejele ekweminyaka eyisikhombisa ngemva kokutholakala bele cala lokuphatheka kudlakela olwenzakale ngoZibandlela lonyaka.
*** Kulenkulungwane lenkulungwane zabeZimbabwe abangena kweleBotswana okungekho emthethweni asebebotshiwe babuyiselwa ekhaya, lokhe amapholisa eBotswana esungule umkhankaso avame ukuwenza minyaka yonke ngesikathi sekhefu leKhisimusi.
*** Imidlalo yenguqu esigabeni se Castle Lager Premier Soccer League ingena kuviki yamatshumi amathathu lambili kulimpelaviki njalo amaqembu amathathu alwisa ukuphakamisa isicoco kuzamele abophe ziqine ngoba ebhekane lemidlalo enzima.
*** KuWoza Friday liviki silomculi womdumo weRhumba uGibela Bemsola ehamba leqembu lakhe leFohlani Sounds abethule idlalade labo elitsha.
*** KuLiveTalk namhlanje sikhangela udaba lokuguqulwa kwamabizo emigwaqo emadolobheni atshiyeneyo eZimbabwe, eminye inikezwa ibizo likaMongameli Emmerson Mnangagwa. Nxa lifuna ukungena kuhlelo sithumeleni umlayezelo kunombolo ezithi 0012024650318. Lingakhuthwa yilezindaba lezinye kuStudio 7 ngo half past 7 ntambama lango half past 6 ekuseni, kumagagasi athi 909 am, 4930, 15580 laku 6080 kilohertz kuShortwave.